KEDU KA ESI AMATA ỌDỊICHE DỊ NA IPHONE ỌHỤRỤ AHỤ SITE NA WEGHACHITE - IOS - 2019
Kedu ka esi amata ọdịiche dị na iPhone ọhụrụ ahụ site na weghachite
Ajụjụ nzuzo ahụ bụ akụkụ dị mkpa nke usoro nchedo saịtị ahụ. Mgbanwe nke okwuntughe, nchekwa nchebe, iwepu modulu - ihe niile a ga - eme ma ọ bụrụ na ị maara azịza ziri ezi. Ikekwe mgbe ị debanyere aha na Steam, ị họọrọ ajụjụ nzuzo na ọbụna ebe edepụtara azịza ya, ka ị ghara ichefu ya. Ma n'ihe metụtara mmelite na mmepe Steam, ohere ịhọrọ ma ọ bụ gbanwee ajụjụ nzuzo ahụ apụkwaghị. N'isiokwu a, anyị ga-eleba anya na usoro nchebe agbanweela.
Gini mere eji wepu ihe nzuzo na Steam
Mgbe ọbịbịa nke ngwa ngwa ngwa Steam Guard, ọ dịghịzi mkpa iji ajụjụ nchekwa. E kwuwerị, mgbe ị jikọtara akaụntụ gị na nọmba ekwentị ma wụnye ngwa ahụ, ị ​​nwere ike ikwenye ihe niile site na ngwaọrụ mkpanaka gị. Ugbu a, ọ bụrụ na ị nwere mkpa iji gosipụta na ị bụ onye nwe akaụntụ gị, a ga-agwa gị na koodu ezipụ dị iche iche ezigara na nọmba ekwentị gị, na ogwe pụrụ iche ga-apụta ebe a ga-abanye koodu a.
Iji ngwa Nchebe Steam dị ka onye na-emegharị ihe na-agbagharị agbagharị kpamkpam n'ụzọ dị otú ahụ dị ka ajụjụ nzuzo. Onye n'eziokwu bụ nchedo dị irè karị. Ọ na-emepụta koodu nke a ghaghị ịbanye n'oge ọbụla ị banyere n'ime akaụntụ Steam gị. Code gbanwere ọ bụla sekọnd 30, ọ nwere ike iji otu ugboro ma enweghị ike ịkọwa ya.